यौनमा किन रमाउादैनन् नेपाली?
[2013-01-21 오후 12:07:00]
नेपाली महिलालाई सानैदेखि कुनै न कुनै रुपमा सेक्स खराब कुरा हो भनेर सिकाइएको हुन्छ । विवाहअघि सेक्स गर्नु हुदैन, परमपुरुषसागको सम्बन्ध पाप हो, पुरुषहरुको काम नै महिलालाई भाग्ने हो भन्ने जस्ता कुरा सुन्दा सुन्दा सेक्स मेरो पनि आवश्यकता हो, त्यसमा मेरो सक्रियता सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै ओझेलमा पर्दछ । पढे–लेखेका महिलाहरुलाई सेक्सका बारेमा धेरै ज्ञान छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर अचेतन मनमा गढेका यस्ता कुराले उनीहरु खुलेर रमाइलो गर्न सक्दैनन् । बत्ती बालेर सेक्स गर्न मान्दैनन भन्ने कुरा सुन्नु भएकोनै होला । त्यसको कारण उनीहरुका विद्यमान सेक्सप्रतिको वितृष्णा नै हो । जबकि नाङ्गो हुनु सेक्सको अनिवार्य जस्तै हो ।
कतिपय युगल जोडिहरु झगडा गर्दछन्, यस्तो लाग्छ, उनीहरु तुरुन्तै छुट्नेवाला छन् तर वर्षौसम्म पनि उनीहरु सागै हुन्छन् । यसको कारण के होला ? यसको कारण पनि सेक्स नै हो । तपाई–हामी सबैले दर्जनौ यस्ता जोडि देखेका छौ, जो यति झगडा गर्छन्, कुटाकुट गर्छन कि भोलि नै छुट्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ । वास्तवमा उनीहरुलाई छुट्टिन नदिने कारण सेक्स नै हो । सेक्सका बेला यी दुईबिच जुन प्रेम प्रकट हुन्छ, त्यो छुट्टिसकेपछि नपाइने मनोविज्ञानका कारण उनीहरु जे–जस्तो सहेरभएपनि बसिरहेका हुन्छन् । सेक्सका समयमा शारिरिक सुगन्ध एक–अर्काले वर्षौसम्म पाएका हुन्छन् । छाला–छालाबीचको घर्षण प्रिय हुन्छन् । कतै न कतै त्यो प्रिय क्षण मनको अन्तरमा बसेको हुन्छ , त्यसैले उनीहरुलाई छुट्टिन दिएको हुदैन । एक जना लेखकले कतै भनेका छन् , नजिकै प्रहरी चौकि छ , सहयोग गर्ने वकिलहरु छन् ,प्रशस्त कानुन छ, यद्यपि एउटी महिला पुरुषको यातना खेपेर वर्षादेखि बसिरहेकी छे । किन? किनभने ऊ त्यो व्यक्तिको सेक्समा रमाएकी छे ।
नेपालमा सहरी क्षेत्रमा माहिला–पुरुष सेक्समा सेक्समा उदार हुदैछन् यससागै सेक्समा विभिन्न प्रयोग पनि भएको सुन्न पाइन्छ, यसलाई लिनुभएको छ ? सहरमा सेक्स टायका सामाग्री बेचविखान हुन थालेका छन् । सुरुसुरुमा मलाई पनि सेक्स टोयमा युवाहरुमात्र जानछन् कि भन्ने लागेको थियो तर एक साताको अध्ययनमा के पाइयो भने सेक्स सपमा सबै वर्गका मानिसमा पुग्दोरहेछ । यसले नेपाली समाज सेक्समा उदार हुदै गएको देखिन्छ ।यद्यपि कस्तो सेक्स राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा दुई जनाबिचको यौन व्यवहारले छुट्टयाउने कुरा हो । यौन क्रियाकलापका बेला दुवै जना पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छन् भने त्यो क्रियाकलाप अरुका अरुका लागि अप्राकृतिक भए पनि राम्रो हुन्छ, सन्तुष्ट छैनन भने हामीले भनेको प्राकृतिक पनि नराम्रो अहिले गुदामैथुन, मुखमैथुन, कुरा पनि धेरै हुन थालेका छन् ।
विदेशमा विषेश गरि शिक्षित जोडिहरु सेक्समा समान सहभागिता खोज्दछन् । त्यहा सेक्स भनेको मेकिङलभ हो । यदि कुनै पुरुषलाई मुखमैथुन रमाइलो लाग्छ भने त्यहा महिलाहरुले पनि आफुलाई त्यहि रुपमा आफ्नो सन्तुष्टिको आधार खोजिन्छन् । फलस्वरुप महिलाहरु पनि त्यति नै रमाइलो मान्दछन् । नेपालमा भने महिलाहरु आफ्नो सन्तुष्टिको अधिकारका सम्बन्धमा त्यति सचेत छ्रैनन । त्यसैले आफ्नो पार्टनर ले मुखमैथुन वा गुदमैथुनको कुरा गर्‍यो भने आफु जबरजस्तीमा परेको अनुभव अनुभव गर्दछन् । त्यसमाथि उनीहरुको मनमा सेक्स भन्नेबित्तिकै पुरुष लिङग महिला योनिमा जाने कुरा मात्र मनमा गढेको छ । सेक्समा मन नमिल्नु वा सेक्सप्रति दुवैको एकनासको शिक्षा नहुनु नै समस्याको कारण हो ।
किशोरीहरुमा हिस्टेरिया भन्ने एउटा परम्परागत रोग देखिन्छ यसको कारण यौन असन्तुष्टि हो भन्ने गरेको छ , खासमा यो के हो ? किशोरवयमा अचानक बेहोस हुने वा अन्य क्रियाकलाप देखाउने रोग भएकाले हिस्टेरियालाई यौनसाग जोडिएको हो । वास्तवमा यो यौनसाग सम्बन्धित हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । आजभोलि यसलाई कन्भर्जन डिस्अर्डर भनिन्छ । पहिले हिस्टेरिया भएका युवतीको विवाह गरिदिदा यो रोग हराएको पाइयो । कुनै रोग विवाहपछि निको भएको देखेपछि यो यौन असन्तुष्टिसाग सम्बन्धित हो भनेर व्याख्या गरियो यद्यपी आजभोलि यौन असन्तुष्टिलाई मात्र यसको कारण पनि हिस्टोरिया हुन सक्छ ।
विवाहको केहि वर्षपछि पुरुषहरु आºना श्रीमतीको यौन चाहान कम भएको गुनासो गर्दछन् । उनीहरु परस्त्री गमन गर्न थाल्दछन् फलस्वरुप परिवार नै विखण्डनको अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । विवाहको पहिलो वर्ष महिलाहरु श्रीमानप्रति जति समर्पित हुन्छन् त्यसमा सन्तान जन्मिएपछि कमी आउादै जान्छ । उनीहरुको ध्यान श्रीमानभन्दा छोरा–छोरीप्रति जान्छ तर पुरुषले श्रीमतीबाट त्यही व्यवहार चाहान्छन् । त्यो नपाएपछि उसले बाहिर आाखा लगाउन थाल्छ । आजभोलि धेरै समस्याको मुल जरो कतै न कतै यौनसाग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा एकथरी यस्ता महिला छन् जो खुलारुपमा सेक्सका कुरा गर्छन र आºनो स्तनलाई नै आर्कषणको केन्द्र बनाउदछन् धेरै महिलाहरुको लागि यौन लाजको विषय हो ।
यद्यपी लाजको विषय भन्दैमा उनीहरु त्यसलाई प्रकट गर्दैनन् भन्ने होइन । उनीहरु राम्रो गाजल लगाएर चिटिक्क परेर आºनो यौनिकता प्रर्दशन गरिरहेका हुन्छन् । मानिसले कुनै न कुनै रुपमा आºनो चाहाना प्रकट गरिरहेको हुन्छ । मेरो विचारमा कसैले आाखामा गाजल लगाउनु र कसैले आधा स्तन खुला छाडनु खासै भिन्नता छैन । दुवैले बाहिरी मानिसलाई आफुतिर आर्कषित गरिरहेका छन् । महिला मात्र होइनन कि पुरुषले पनि कहिले फ्रेन्च कट दाह्रि पालेर होस् वा आफुलाई सफाचट राखेर होस आºनो यौनिकता प्रर्दशन गरिरहेका हून्छन् । आज यौनसम्बन्धि पत्रिका सबैले पढ्दछन किनभने सबैलाई थाहा छ यहाा कुनै न कूनैरुपमा आºना मनभित्रका कुण्ठा, समस्या वा गोप्य कुरा प्रकाशन हुन सक्दछन् । यौन भनेको यस्तो कुरा हो, जो कसैले प्रकट गर्ने तरिका मात्र फरक हुन्छ ।
रेखा थापाले कम वस्त्र लगाउछिन त्यस कारण उनी सबैभन्दा बढि यौन इच्छा भएकी महिला हुन् र गाउाले युवती लजाउछिन त्यसले उनमा यौनइच्छा छैन भन्ने होइन। यति हुादाहुादै पनि नेपालीहरु किन राती हिप्योक्र्पाट भएका ? किनभने हामीमा यौनका विषयमा शिक्षा नै भएन । आमाले हुर्कदै गरेकी छोरीसाग बुबाले उमेर बढ्दै गएको छोरासाग खुलेर कुरा गरेनन् । उनीहरुले यसलाई लाजको विषय भने । शिक्षक– शिक्षिकाले पनि त्यसलाई गोप्य भनिदिए । यसरी जोबाट यौनका विषयमा खुलेर कुरा आउनुपर्नै हो, उनीहरुबाटै गलत भनेर लाञ्छना लगाइएपछि विचरा यौन कलङकित हुने नै भयो ।
म सभ्य छु भन्नेहरु नै यसलाई नराम्रो भन्न बाध्य भए । यो हाम्रो शिक्षकको दोष हो, हाम्रो संस्कारको दोष हो । अहिले नया पुस्ता घरमा यौनलाई गलत भनेको सुन्छ तर इन्टरनेट र साथीभाइका माध्यमबाट सबै कुरा सिकिसक्छ । यो गम्भीर अवस्था हो । बाहिरबाट आएइको ज्ञान खराब पनि हुन सक्छ । यदि घरबाट विद्यालयबाट उचित तवरले यसलाई सिकाउादै लाने हो भने मानिसले सहि ज्ञान पाउाछ , नत्र यसबाट यौन विकृति व्यक्ति मात्र तयार हुन्छ । धेरै वर्षअधि केहि मनौविज्ञानले थाइल्याण्डमा यहि विषयमा चर्चा गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था प्रत्येक दिन बढिरहेको छ ।